Tuesday February 25, 2020 - 11:59:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal qorshaysan oo dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
sawir hore magaalada Baardheere
Wararka ka imaanaya Gedo ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Al Shabaab ay xalay gudaha Baardheere ka fuliyeen weerar qorshaysan waxayna ku dileen mas'uuliyiin katirsan dowladda Federaalka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalyahanadda Al Shabaab ay udhaceen dhismayaal ay ku sugnaayeen laba guddoomiye waaxyeed oo katirsan maamulka Baardheere waxaana kamid ahaay nin sixiroole ah oo caan ka ahaa deegaanka.
"Howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada Baardheere ayay ku dileen sedax guddoomiye waaxyeed oo katirsanaa murtadiinta waxaana ku jiray nin sixiroole ah" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Goob joogayaal ku sugan Baardheere ayaa warbaahinta u sheegay in saaka markii uu waagu baryay ay bartmaha magaalada ku arkeen Meydadka sedaxda mas'uul ee xalay ladilay.